TILMAAMO FARSAMO IYO SHAQOOYINKA SALAADIGA AH 100 GAARI OO KU YAALA XAGAAGA XAGAAGA - MOTOBLOCK
Ugu Weyn Ee Motoblock
Noocyada isticmaalka Salute 100 qalabka baabuurta, sifooyinka farsamada qalabka
Motoblock - waa unug lagama maarmaan u ah beer yar iyo dacha. Baaxadda isticmaalka tiknoolajiyadaani waa mid aad u ballaaran, gaar ahaan tan soo-saarka unugyada weli ma istaagi karo, sii deynta moodooyinka cusub ee la hagaajiyay. In this article waxaan ka hadli doonaa ku saabsan Salute 100 motoblock.
"Salaam 100": sharaxaadda qalabka
Warshadda Ruushka ee OAO GMZ Agat ee gobolka Yaroslavl, halkaas oo laga soo saaro Salyut, ayaa bilaabay wax soo saarka unugyadaas 2002. "Salaan 100" waa cutub leh adeegsiyo badan. Liistada shaqada ee ay sameeyaan tiknoolajiyada wax-yaabaha ayaa u oggolaanaya isticmaalka dermada sida barafka, barafka, iyo wax ka badan.
Saalix 100 baabuurtu waxay leeyihiin gaasiin baasiin, waxa kale oo la filayaa in ay soo saaraan mishiin naaftada, kaas oo hubiya hawlgallo dheeraad ah. Mashruucan wuxuu ka shaqeeyaa xawaaraha iyo rikoorka. Gawaarida mootada ee u mahadcelisay waxay u socon kartaa xawaare ilaa 8 km / h.
Salyut 100 motoblock waxay u egtahay qaabka ugu fiican Salyut maanta: waxay leedahay miisaan iyo miisaan yar, way fududahay in la xakameeyo, tusaaluhu wuxuu leeyahay tayada waxtarka badan iyo kalsoonida hawlgalka, dayactirka iyo gaadiidka qaybta ma aha mid adag.
Ma taqaanaa? Bilawga wax soo saarkii ugu horreeyey ee soo dejinta ee USSR wuxuu ahaa dhamaadkii toddobaadyadii qarnigii la soo dhaafay. Laba ka mid ah horudhac geedka Perm Aviation iyo warshadda Leningrad "Red October" waxay ku dhowdahay hal mar wax soo saarka.
Qeexitaanada "Salut 100": qaababka qaabka
Tilmaamaha dabiiciga ah waa kuwo cajiib ah:
Qaadashada dhiirigelinta dhiirigelinta: Lifan 168F-2B, OHV; miir dabacsan; 196 cm3.
Soo gudbinta: xajinta suunka; gearbox gear; 4 Diyaar garowga, 2 gadaal, waxaa suurtagal ah in la bedelo gawaarida gawaarida; Awoodda korontada.
Xawaaraha caadiga ah: 2.8-7.8 km / h.
Awoodda baabuurta Salyut-ga (maks.): 4.8 kW (6.5 hp) xawaare dhan 3,600 daqiiqaddii.
Awoodda battanka shidaalka: 3.6 l.
Awoodda shidaalka ee saliidda: 0.6 l.
Wadada gaadiidka: 360/650 mm.
Dhexdhexaadinta: 1200 mm.
Wareegga ka shaqaynta (beerashada): 300/600/980 mm; qoto dheer - illaa 250 mm
Dhameystir buuxa oo mootada ah "Salute 100"
Qalabka dhamaystiran ee qalabka loo yaqaan 'motoblock' waxaa ka mid ah: lix qaybood oo kala duwan oo kala ah carrada, dhirta ilaalisa dhirta; mareegta xawaaraha mobile; Lab iyo laba tolba waa inay qoduus ka dhigaan, furaha; Masruufaha qaybaha ganaaxa; qiiqa shidaalka; qalab.
Qalabka soo socda ayaa lagu xiran karaa isbedelka noocaan: fiiqanaha iyo farsamooyinka, barafka, barafka, burushka, majarafadda.
On motor-cultivator "Salute", mashiinnada gaarka ah ee mindhicirka ayaa la rakibay; si sahlan u soo galaan dhulka, mindiyaha waxaa lagu sameeyey qaabka dhirta, oo ka samaysan biraha gaaska lagu kalsoon yahay. Xidhmada waxaa ka mid ah saddex lammaane ah oo dhejis ah oo isku xirta faraha.
Waa muhiim! Iyada oo la adeegsanayo gudbinta tiknoolajiyada qalabka jiidista, suunka waxaa lagu rakibay gawaarida lagu riixo.
Maxay ku socon karaan daaqa beertaada
Shaqada ugu kala duwan ee Salyut socodka ayaa la sameyn karaa:
cutubka wuxuu ku kori karaa dhulka si aan kala go 'lahayn, darbiyada, jeexjeexyada foomamka, dabacsanaanta iyo dhulka hoostiisa;
cirifka socodka cawsku wuxuu cawska ku daaqaa cawska, wuxuu nadiifiyaa waddooyinka beerta;
iyada oo aad ku dhali karaa abuur laga beerto iyo qodo ilaa digriiga iyo xididdada;
socodka gadaashka gadaashiisa ayaa awood u leh inuu bamgareeyo biyaha oo uu qaado wax kasta oo xamuul ah;
Barafka barafka ee loogu talagalay Salut motoblock waxaa la siiyaa jiilaalka.
Motoblock ku habboon shaqada beerta, beerta, aqalka dhirta lagu koriyo iyo xitaa meelaha ku yaal buuraha. Dhirta Shoodhada ee baabuur-dabka ayaa u oggolaanaya in ay ka shaqeeyaan dhammaan noocyada carrada, oo ay ku jiraan ciidda bikradaha ah. Raaxo lagu hagaajin karo dhererka iyo dhinacyada dhinacyada isgoysyada ayaa suurtagal ah inaysan raacin cutubka dhulka dhul-beereed. Salyut sidoo kale waxaa lagu xakameynayaa ballaadhinta iyo qoto dheer oo la rabay markaad dhulka la shaqaynayso. Marka lagu daro dhammaan kore, korriin socodka waxaa loo isticmaali karaa il awoodeed.
Xiiso leh Wax soo saarka ee USSR ee motoblocks wuxuu ahaa xaddidna ma aha oo kaliya Russia. Jarmalka (Yerevan), ayaa waxaa loo sameeyay nalalka korontada, Georgian Kutaisi oo ka hooseysa liisamada Talyaaniga, waxay soo uruuriyeen kulanno miisaaniyadeed ah oo ku yaal Ukraine, warshad lagu dhajiyay wax soo saarka gawaarida, kaas oo u shaqeeya illaa maanta waa mid gaar ah - warshad lagu magacaabo Advisory in Khmelnitsky.
Sida loo isticmaalo mootada "Salute 100"
Ka hor intaanad shaqada bilaabin saladhka salud, waa inaad hubisaa in saxaraduhu si sax ah loo rakibay: waad ka hubin kartaa tilmaamaha. Ku rakibidda xargaha ayaa si weyn u fududeyn doonta shaqada, cutubku ma qodayo qoto dheer ee ciidda, adigana ma sameyn doono dadaal badan.
Digniin! Haddii aan lahayn xargaha, socodku wuu gariiri doonaa, oo wuxuu ku boodi doonaa gacmaha, inta badan dhulka ku dhufo. Waa inaad si joogto ah u beddeshaa qalabka jeexan si aad uga soo baxdo dhulka.
Haddii aad rabto in aad soo qaadatid dhulalka bikradaha ah ee Salyut-baabuur, samee dhowr marxaladood. Heerka hal mar - xawaaraha ugu yar, ka saar rucubka lakabada sare, oo ay weheliso cowsku wuxuu tagi doonaa. Habka labaad ee qalabka ugu horeeya, xawaaraha dhexdhexaadka ah, waxoogaa qoto dheer si qoto dheer u qaada muraayada dusha sare. Oo markii saddexaad oo qulqulaya qoto dheer, dhulka si fiican u kabaab.
Markaad beeraha ku dhexjirto dhawr maroodi, beddel jihada. Way fiicantahay oo fududahay in laga shaqeeyo dhul qalalan. Haddii aad markii hore soo martay, qaadashada lakab qoyan, ka dibna ha ku degdegin - ha u qalajin. Calaasyo kale: mar walba hubi heerka saliidda, buuxi cutubka leh gaaska tayadiisu sarayso, wax dhibaato ahna kuma jiri doonto qalabka.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ka jirta Salaan 100 gaari ah
Faa'iidooyinka tufaaxa saliidu waxay ku jirtaa cabbirka yar, waxay fududeyneysaa in la ilaaliyo oo la maareeyo. Sidoo kale faa'iidooyinka waxaa ka mid ah jadwalka dhimista, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si sahlan u hagaajiso xawaaraha iyo isgaadhsiinta iyo isgoysyada. Xaqiiqda, suunka suunka: garsoorka ka eeg, suunka hooyo ee kubbada cagta ee aan ku adkeynin hawlgalka muddada dheer, waana ku haboontahay inay beddelaan iyaga oo leh kuwa ku kalsoon. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah qalabka isgaarsiinta iyo gudbinta. Hadda, si aad u maamusho, uma baahnid in aad leexiso oo aad sameyso dadaal.
Tilmaamkan waxaa loo tixgeliyaa "tufaax" ugu wanaagsan ee loogu talagalay hagaajinta dib-u-hagaajinta qalabka gacanta. Waxaa loo sameeyaa si ay u noqdaan kuwo la isku-hagaajiyo oo ergonomic ah, kaas oo ku riixaya qaldinta marka la shaqeynayo. Isla sidaas oo kale waxay ku xiran tahay laydhka gawaarida: ka hor inta aan laga sameynin biraha oo laga yaabo inuu gacanta ku jiido marka uu baddalayo, hadda waa laga sameeyay balaastigga, ma jiido mana u baahna xoog. Fayadhowrku wuxuu leeyahay khibrad la isku halleyn karo oo si fiican u fekeraya, si siman u qaybinaya miisaanka iyo dadaalka ku shaqeynaya lifaaqyada.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah suunka yar ee tayada hoose leh iyo xagasha yar ee gacanta.
Maqaalkani wuxuu tixgelin doonaa dhammaanba xaqiiqooyinka ku saabsan saldhigga Salut, waxa kaliya oo ay tahay in la soo koobo: shaki la'aan, cutub kan la mid ah ayaa loo baahan yahay beerta, maadaama ay aad u sahlayso shaqada beerta iyo beerta. Sameynta dadaalka ugu yar, waxaad sameyn kartaa shaqooyin badan oo ku caawiya socodka gadaashiisa ka dambeeya iyo ma aha oo kaliya xilliga xagaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Motoblock 2019